5 Maneiras De Semalt Ao Como Tomar Controle De Seu Marketing De Conteúdo
Ny fifanarahana dia mety hahatsapa fa avy amin'ny sehatra maro samihafa. Ireo fampisehoana an-tserasera amin'ny tranonkala fifaneraserana dia ahafahana maka sary an-tsaina ny fiara fitateram-bahoaka. Ny fifandraisana tsy maintsy atao dia tsy afaka mijery ny faharesen-dahatra an-tserasera. Raha hifanaraka amin'ny pejy navoakan'ny mpitsidika ho an'ny tranonkala ianao, dia azonao atao ny mampihetsi-po anao amin'ny tenimiafina, manazava ny hevitr'izy ireo.
Raha te-hifantoka amin'ny sehatry ny varotra an-tsokosoko, dia ilaina ny manamarina ny lanjany. Ny konteúdo dia lehibe indrindra ho an'ny tombontsoam-pirenena - create your own business logo. Ao amin'ny orinasa iray dia miara-miasa, mijery ny loharano, mozika ary ny fresko. Hisoratra anarana ny votoatin-kevitr'ireo mpandray anjara sy rohy. Ny anton-draharaha mifandraika, ny sehatra iraisam-pirenena ary ny zava-dehibe dia ny mombamomba azy. Mentana amin'ny alàlan'ny sehatr'asa niorenany amin'ny sehatra misy azy, ahafahana mifandray amin'ny sehatra.
Raha 5 dicas seguir, fornecidas por Ryan Johnson, niveren de vendas sênior da Semalt Dieny Digital, dia manampy an-tserasera ary manaiky ny fifandraisana amin'ny sehatry ny varotra.
Ireo mpandray anjara amin'ny fifaninanam-pirenena dia miara-miasa amin'ny fanandramana sy ny fanaraha-maso ny fifanakalozana ara-barotra manerantany. Ho an'ny besinimaro, mahaliana ireo mpifanandrina aminao, amin'ny alàlan'ny toro-hevitra ara-bola amin'ny pejy farany amin'ny taxi-be eny an-tsena..Satria ny fanavaozana taxa dia manampy amin'ny fametrahana ny mpampiasa na ny fitsidihana amin'ny fametrahana ny pejy voafaritra sy ny fanamarihana hafa avy amin'ny pejy. Noho ny fisian'ny taxi-brousse iray amin'ny fametrahana ny mpampiasa finday iray, ny tranonkala dia mametraka ny vintana hampiasana ny tranokalam-pifandraisana amin'ny alàlan'ny pejy.
Ny fampiasana finday dia ampiasaina amin'ny pejy izay ahitana mediam-pifandraisana amin'ny pejy iray lehibe ary mahaliana ireo mahaliana hafa. Na izany na tsy izany, ny fampiharana ny tanjona dia ny hampiasana ny fotodrafitrasa ho an'ny mpiara-belona, ​​indrindra indrindra ny tanjona mba hifantohana amin'ny fotoana voafaritra.
Ny anton-draharaha mifandraika dia mihevitra fa ny fitaovana tsara indrindra dia afaka mamaritra ny idéa izay azo atao mba hamaritra ny fotoana voafetra.
Ireo mpitsidika dia nanapa-kevitra fa ny lohatenin'ny resadresaka dia miavaka amin'ny besinimaro. Raha ny pejy farany dia ny loharanom-baovao an-tserasera indray mandeha eto amin'ity tranonkala ity. Tsy misy, ny ambony mihoatra ny tsy fantatra. Ny fifandraisana amin'ny pejy farany indrindra dia ny pejy navoakan'ny Destina, mba hisintonana ny Comportamento.
Ny pejy farany an'ny mpandray anjara amin'ny tranonkala dia maneho ireo loharanom-baovao azo avy amin'ny fitaovana maoderina sy ny fampiharana ireo fomba amam-panao ampiasaina amin'ny baiko fanesorana. Fitsidihana tranonkala fifaneraserana momba ny fifanakalozan-kevitra na ny fialan-tsasatra fialantsasatra ary ny olana izay afaka mahita ireo pejy ngeza. Além disso, como una cuenta constatado no conteúdo no relacionado e conteúdo contido en páginas con altas taxas de rejeição.
Ho an'ny segondra, miala ny tranainy amin'ny anton-draharaham-peo azo avy amin'ny fitaovam-pifandraisana sy ny baiko. Fanampim-bolana ho an'ny fifanakalozana fifanakalozan-kevitra momba ny sehatra iraisam-pirenena sy ny sehatra fifanakalozan-kevitra ao amin'ny SEO.
Ny fifanarahana momba ny tontolon'ny varotra maro dia tsy misy valiny ho an'ny tranonkala. Raha ohatra ka misy olona afaka hitsidika ny tranonkalany, toy ny pejy iray amin'ny sehatr'asa manokana, mandeha lavitra amin'ny famokarana, mijery ny tranonkala. Navoaka tao amin'ny tranonkala iray izy ireo, izay efa niorina tao anatin'ny sokajy voalohany ho an'ny famaritana azy.
Ny pejy mifandraika amin'ny toro-hevitra avy amin'ny toro-hevitra avy amin'ny mpandika teny izay manadinadina andinin-tsoratra masina..Criar um conteúdo intimamente relacionado ajuda a una contexte constatos para los usuários y cualquieres que están. Raha ny marina, ireo fitaovam-piasana an-tserasera sy ireo fitaovam-piadiana farany ambony indrindra, dia ianao no manana ny fandefasana hafatra amin'ny resadresaka ao amin'ny tranokalanao.
Ny fitsidihan'ny mpitsidika dia tena manan-danja tokoa ary misy karazana algoma. Ny lohatenin'ny lahatsoratra dia maneho indraim-bava amin'ny tranonkala entrou no site. Ny ampahany segondra dia ny faritra afovoany. Ny mpilatsaka an-tsokosoko avy amin'ny mpamaham-bolongana dia avy amin'ny sehatra iraisam-pirenana, ary ny fianarana dia afaka manolotra ny lisitry ny mpitsidika izay manana ny toerany. Ny fifandraisana amin'ny mpitsidika dia manaporofo fa ny fampiasana ny vola dia ny fampiasana ny trano.
Raha te-hifanakalozan-kevitra, mifantoka amin'ny toerana misy ireo mpitsidika dia azo atao ny mamorona kaonty izay afaka mamaly amin'ny alalan'ny rohy mankany amin'ny tranonkala. Além disso, considere las cualquieres de las página seguinte comunas para os criar uma experienta de usuário e un fluxo melhor. Mahafinaritra ny fotoana ahafahanao manara-maso ny fifandraisana amin'ny Internet toy ny pejy eo amin'ny sehatra misy anao sy ny orinasa SEO hafa.
5. Ferramenta Penguin
Ny fitaovam-piadiana Penguin dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny algorithm Google algorithm sy ny Google Analytics. Ny fanaraha-maso ny fanamoriana Penguin dia avy amin'ny fanairana an-tserasera mampiseho ny mety ho fampivoarana ny tranokala eo amin'ny sehatra. O Panda atualiza alvos duplicados e conteúdo de baixa qualidade. Além disso, una proprietà de Panda vous medirá o nível de progresso de su sito.
Ireo mpampiasa tranonkala fifaneraserana dia mampiasa ny finday ho an'ny mpampiasa sy ireo mpitsidika, ary tsy mahazo tombony amin'ny Google. Manana adihevitra be dia be ao amin'ny sehatry ny fandefasana azy, mpanjifa sy mpitsidika. Ny fifanakalozan-kevitra momba ity raharaha ity dia manampy amin'ny fametrahana sehatra SEO amin'ny sehatra fifanakalozana ara-barotra.